Fiakaram-bidy ankehitriny: Tonga amin'ny lanitra ny horohoro amin'ireny sarimihetsika mahatsiravina napetraka amin'ny fiaramanidina ireny
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Fiakaram-bidy ankehitriny: Tonga amin'ny lanitra ny horohoro amin'ireny sarimihetsika mahatsiravina napetraka amin'ny fiaramanidina ireny
by Chris Harper Aprily 12, 2021
nosoratan'i Chris Harper Aprily 12, 2021
Tsy mora velively ny manidina. Aleo lazaina ho marina, nofy ratsy tanteraka izany, ary iza no mahalala hoe rahoviana no milamina ny dia. Manomboka amin'ny fikorontanana ka hatrany amin'ny zazakely mitabataba, ny sidina dia toy ny horonantsary mampihoron-koditra, ary ilay karazana dia nanararaotra ireo horohoro tamin'ny sidina. Ireo horonantsary horohoro napetraka tamin'ny fiaramanidina dimy feno bibilava, zombie, matoatoa ary fahafatesana mihitsy dia hampieritreritra anao ny sidinao manaraka.
Bibilava amin'ny Plane (2006)
Tahaka ny nolazain'i Indiana Jones hoe: "bibilava, naninona no tsy maintsy bibilava?" Bibilava amin'ny Plane no sarimihetsika mampihoron-koditra faratampon'ny fiaramanidina - mpampientanentana avo-oktana kintana miaraka amin'i Samuel L. Jackson.
Manaraka vavolombelona iray, Nevin Flynn (Samuel L. Jackson), mpiasan'ny FBI, dia nanao sidina avy tany Hawaii nankany Los Angeles. Saingy tsy famindrana mahazatra ity satria mamono bibilava mahafaty ao anaty fiaramanidina ny mpamono olona hamono ilay vavolombelona. I Flynn sy ny mpandeha sisa dia tsy maintsy mifamatotra raha te ho tafavoaka velona amin'ny fanafihana mahafaty izy ireo.
Mitantana sady mahafinaritra no mampatahotra, Bibilava amin'ny Plane manana izay tena antenainao avy amin'ny sarimihetsika toy izao. Amin'ny maha-sarimihetsika B bebe kokoa azy, ilay sarimihetsika dia mbola mahavita miditra ao ambanin'ny hoditrao miaraka amina andiana bibilava tsy mampihoron-koditra misosa eo anelanelan'ny lalantsara, eo ambanin'ny seza, latsaka avy any amin'ny lohan'ny kompania, ary manaikitra sy mametaka an'ireo niharan'izy ireo. Masiaka fa tsy ho an'ny kivy, Bibilava amin'ny Plane dia fotoana mahafinaritra manodidina azy feno hadalana amin'ny sarimihetsika B.
Sidina 7500 (2014)
Misy zava-miafina mitranga amin'ny sidina 7500. Avy amin'ny talen'ny Ny lolompo, Takashi Shimizu, dia mitaingina fientanam-po mampatahotra izay hitazonana anao eo an-tsoron'ny sezanao.
Ao anatin'ilay sarimihetsika, ny sidina 7500 dia miala amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Los Angeles mankany Tokyo. Rehefa mamakivaky ny Oseana Pasifika ny sidina mandritra ny alina mandritra ny sidina adiny folo, nijaly noho ny fikorontanana ny fiaramanidina ka maty tampoka ny mpandeha iray. Tsy fantatry ny mpandeha sisa, nisy hery supernatural iray navoaka, naka tsimoramora tsirairay ireo mpandeha.
Ny rivo-piainana dia iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny horonantsary satria i Takashi Shimizu dia nanamboatra tantara matoatoa mampangitakitaka. Sidina 7500 dia sarimihetsika an-trano an-tranomaizina miorina amin'ny fiaramanidina. Shimizu dia mampiasa singa mampihoron-koditra Japoney toy ny lalantsara lava sy maizina ary matoatoa miafina any aoriana. Tsy hahita tovovavy matoatoa lava volo amin'ity sidina ity ianao, na izany aza, satria Shimizu dia mampiasa ny lohahevitry ny fahafatesana sy ny alahelo hitarika ny tantara fa tsy ireo mampatahotra amerikana mitsambikina.
Mena mena (2005)
Tsy mila bibilava na matoatoa hampatahotra ity sidina ity.
Napetraka voalohany tamin'ny sambo amin'ny fiaramanidina, Mena mena manaraka ny talen'ny hotely Lisa Reisert (Rachel McAdams), manidina mody avy any amin'ny fandevenana ny renibeny. Noho ny toetr'andro ratsy dia tara ny sidina. Nandritra ny fiandrasana ny sidiny dia nifanena tamin'i Lisa Rippner (Cillian Murphy) tsy hay tohaina i Lisa, ary nanomboka namony ny fitiavana.
Araka ny mety ho vintana dia miara-mipetraka amin'ny fiaramanidina izy ireo, saingy tsy ela dia fantatr'i Lisa fa tsy kisendrasendra izany. Manantena ny hamono ny lohan'ny Security Homeland i Jackson. Mba hanaovana izany dia mila an'i Lisa hanamboatra ny efitranon'ny hotely izy. Amin'ny maha fiantohana azy, Jackson dia manana mpiambina miandry hamono ny rain'i Lisa raha tsy miara-miasa izy.
Mena mena dia horonantsary mampihoron-koditra ataon'ny fiaramanidina feno fihenjanana sy fisalasalana mahazatra izay i Wes Craven irery ihany no afaka manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mikasika ny tahotra ananantsika, ny talenta dia manamboatra fanaitaitra ara-tsaina mahery vaika miaraka amin'ny zoro fakan-tsary henjana, jiro manimba ary toerana mihidy mafy, miaraka amin'ny olon-dratsy mampidi-doza ary mitarika vehivavy matanjaka.
Nanaporofo indray i Craven fa afaka mampatahotra antsika izy Maso Mena.
Ratsy mponina: fihenan'ny ala (2008)
Taona maro taorian'ny nitrangan'ny fipoahana tao an-tanànan'i Raccoon, dia niteraka korontana tao amin'ny seranam-piaramanidina Harvardville ny fanafihana zombie Resident Evil: fahapotehana manomboka.
Manomboka ny valan'aretina raha ny sisa tavela tamin'ny tranga voalohany dia namoaka karazana T-Virus, nahatonga ny fiaramanidina nianjera tao anaty seranam-piaramanidina. Ny sisa velona ao an-tanànan'i Raccoon, Claire Redfield (Fitsarana Alyson) sy Leon Kennedy (Paul Mercier) dia natsipy anaty korontana indray satria ilaina ny mitazona ilay areti-mandringana alohan'ny hiparitahany.
Ho afaka hanajanona ilay viriosy ve i Claire sy i Leon alohan'ny hahatongavany ao amin'ny Raccoon City indray?
Tsy napetraka amin'ny fiaramanidina tanteraka, Ratsy mponina: Fahakiviana dia mampatahotra tsy an-kijanona ary feno hetsika tsy miato. fahapotehana dia hanome fahafaham-po ireo mpankafy ny franchise satria mahatoky kokoa amin'ny lalao ny sarimihetsika noho ny horonantsary mihetsika mivantana. Ny sarimiaina CG fakana sary dia novonoina tsara, nahatonga ny sarimihetsika ho hita sy tsapany ho toy ny sary an-tsary 90 minitra avy amin'ny lalao. Manana horohoro mahomby, sarimihetsika manaitra, ary mendrika hijerena ity horonantsary ity.
Mandeha miaraka ny sidina Final destination.
Final destination manaraka an'i Alex Browning (Devon Sawa) nanomboka ny dia nankany Paris niaraka tamin'ny kilasiny zokiny. Alohan'ny hiainganana, i Alex dia niaina famintinana ary nahita ny fipoahan'ny fiaramanidina. Nanizingizina i Alex fa tokony hiala amin'ny fiaramanidina ny tsirairay, manandrana mampitandrina azy ireo ny amin'ny loza mananontanona.
Tao anatin'ny korontana, olona fito, anisan'izany i Alex, no voatery nidina avy tao anaty fiaramanidina. Fotoana vitsy aorian'izay dia mijery izy ireo rehefa mipoaka. Alex sy ireo sisa velona dia namitaka ny fahafatesana, saingy ho avy ny fahafatesana, ary tsy ho afa-mandositra ny lahatra izy ireo. Tsirairay, ireo tsy maty tsy ela dia nanomboka lasa lasibatry ny mpijinja ratsy satria tsy misy ny fitsoahana ny fahafatesana.
Final destination mitondra ny fahafatesana any amin'ny haavo vaovao. Feno hipoka tsy ampoizina sy filaharan'ny fihoaram-pefy ny horonantsary. Iza no afaka manadino an'io seho bus malaza ratsy laza io? Saingy ny filaharam-panokafana ny sarimihetsika no miteraka fanahiana sy fientanam-po indrindra. Ny maha-mamorona sy ny tany am-boalohany, Final destination dia foto-tsakafo amin'ny sinema mampihoron-koditra ary manome ny filaharan'ny fiaramanidina mampatahotra indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Raha tsy ampy ho anao ireo sarimihetsika ireo, jereo ireto horonan-tsary mampihoron-koditra nampihorohoro ireto: Ny sidin'ny maty velona: valanaretina amina fiaramanidina, sidina: 666, ilay mampihetsi-po an'i Hitchcockian Flightplan, ary amin'izay mendrika azy, zahao ireo fizarana fanokafana Maty i Freddy: Ny nofy ratsy farany ary Rings.
Horohoro napetraka amin'ny fiaramanidinaChris HarperFinal destinationSidina 7500Mena menaRatsy mponina: fihenan'ny alaBibilava amin'ny Plane
'PG: Psycho Goreman' Tonga amin'ny fikorontanana irery amin'ny Mey!
Resadresaka: Clancy Brown amin'ny 'The Mortuary Collection' sy ny asany maha-olona azy